Thursday February 20, 2020 - 21:36:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska Farmaajo ayaa shaqadii looga eryay taliye ku xigeenkii guud ee ciidamada dowladda Federaalka islamarkaana galaangal ku dhax lahaa wasaaradda Gaashaandhigga,
Sarreeye Guuto Maxamed Cali Bariise oo ahaa ku xigeenka taliyaha guud ee ciidamada Melleteriga ayaa shaqada ka eryidiisa loo sababaynayaa guuldarradii weyneed ee ciidamada dowladda kasoo gaartay weeraradii shalay ka dhacay deegaanno katirsan Sh/Hoose.
Taliyaha la eryay ayuu Farmaajo xilka u magacaabay sanaddii 2019 waxaana xilligii la magacaabayay lagu sheegay sarkaal da'yar oo aqoon melleteri oo heer sare ah waxaase muuqata in guuldarrooyinkii is xixgigay ee Al Shabaab gaarsiisay ciidamada dowladda ay dhulka geliyeen dhammaan khibraddii sarkaalkan.
Dhinaca kale Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Xassan Cali Kheyrre ayaa Isbitalka Xoogga ee Muqdisho ku booqday ciidamadii shalay uga dhaawacmay weeraradii waaweynaa ee ka kala dhacay Ceelsaliini, Qoryooley iyo Lafoole oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Ka hor inta aanu isbitalka soo aadin ayaa waxaa loo xiray waddooyinka iyadoo la hakiyay adeeggii bulshada iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa dad weynaha, sababo la xiriira baqdin laga qabo weeraro uga yimaada Xarakada Al-Shabaab.
Sawirro laga soo qaaday isbitalka ayaa waxay muujinayaan Ra’iisulwasaaraha oo murugeysan mararka qaarna faruuryaha ruugaya kadib markii uu la sheekeystay qaar kamid ah ciidanka ay dhaawacyadoodu fududyihiin ee awoodi karaya in ay ka war bixiyaan wixii ay soo arkeen.
Dhaawacyada waxaa kamid ah kuwa aanan xaaladdooda dalka wax looga qaban karin xilli todobaadyadii lasoo dhaafay ay Tv-yada Muqdisho qaarkood iyo Idaacaduhuba waraysanayeen ciidamo muddo sannad ka hor la dhaawacay oo darxumo ku nool markii ay dowladdu wax u qaban weyday.
Inta badan dowladdu muhiimad masiiso ciidamadeeda dhaawacyada halista ah qaba oo kaliya askariga nasiibka leh ayaa wuxuu ku duceystaa inuu dhoco qarax weyn oo ay mas’uuliyiin ku dhaawacmaan si loogu daro safarka.
Isku soo wada duuboo weeraradii shalay ka kala dhacay Qoryooley, Ceelsaliini iyo Lafoole, ayaa waxaa DFS, looga dilay 78 askari, waxaana lagu gaarsiiyay khasaare dhanka maadiga ah maadaama laga furtay hub iyo gaadiid.